Sidee loo helaa premium deezer lacag la'aan ah?
[Xalin]: Sida lagu Helo Deezer Premium u Free?
Deezer waa mid ka mid ah adeegyada music kuwa isticmaala technology web ku saleysan si aad u hesho si ay macaamiisha ugu kuwan raadkaygay dhawaaqa si aan loo baahnayn si ay u soo bixi. Waayo, kuwa isticmaala kuwaas oo doonaya in ay helaan tareenka offline adeegga taageertaa hindise iyada oo bixisa qorshayaasha ku habboon. Waa website aad u weyn iyo mid ka mid ah tartamayaasha magacyadoodu kale u weyn in industry this. Tusaale ahaan Spotify iyo Google Music, website uu leeyahay 16 million users firfircoon adduunka oo dhan, sidaas darteed ay caanka ah waa wakhtiga oo dhan ka sare. The darajo Alexa hadda website-ka waa 814 ee dunida oo dhan taas oo muujinaysa in dadka isticmaala ay jecel yihiin in ay isticmaalaan si ay u maqlaan jecel raadkooda.
part1: Waa maxay Deezer Premium?
part2: Ma u baahan tahay si aad u hesho caymiska deezer lagu daray?
part3: Sida aad u hesho caymiska deezer lacag la'aan ah?
Waa maxay Deezer Premium?
Hadda waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo qorshe Times ee la bixiyo by Deezer ah. Faahfaahinta dhameystiran in lagu posted on website-ku saabsan qorshaha waxaa laga heli karaa http://support.deezer.com/hc/en-gb/articles/201315531-Your-Subscription sida ay tahay link taageerada. URL Tani waxay sidoo kale keenaysaa in hagaha dhammaystiran oo ku saabsan farqiga u qorshaha kaas oo si weyn lagu talinayaa hor gadashada la sameeyo. premium Deezer iyo premium Deezer lagu daray waa Macmiil bixisay oo ay bixiso shirkadda si ay usoo jiitaan in dadka isticmaala ay. Xisaabta ayaa free yimaado oo aan ka go'an tahay wax sidaas darteed lacagta guud Times in user waa inuu iska bixiyaa dhamaadka bisha waa $ 0. The premium Deezer oo hadda loo yaqaan premium Deezer oo lagu daray yimaado kharashka bil walba $ 7.99. On top of in dalalka ku taageeray lacag la'aan ah Deezer ayaa dhamaantood ma ay taageerayaan ku xidhid ku bixisay. Tayada music ayaa sidoo kale si weyn u kala duwan yihiin. Waayo, kulli premium Deezer lagu daray xubnaha heerka yara bixiyeen waa 320 kbps halkaas oo sida dadka isticmaala lacag la'aan ah ku raaxaysan karaan heerka qayb ka mid ah 128 kbps oo kaliya. Wixii la barbardhigo faahfaahsan waxaa lagula talinayaa in ay soo booqdaan URL http://music-streaming-services.softwareinsider.com/compare/10-113/Deezer-vs-Deezer-Premium bacdamaa uu jawaab ugu wanaagsan ee su'aasha sakhiray. Laga soo bilaabo Times mobile in tiro ka mid ah kuwan raadkaygay kasta oo waxaad dhul kasta oo ka mid ah macluumaadka waxaa laga heli karaa URL ku xusan si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah adeega taas oo uu leeyahay malaayiin kuwan raadkaygay sugaya dadka isticmaala ku.
Ma u baahan tahay si aad u hesho daray premium deezer?
Jawaabta su'aashani waxa ay kaliya ku xiran tahay xaqiiqda ah in aad rabto in aad u helaan malaayiin kuwan raadkaygay in ama aan la bixiyo adeega. Arrinta ugu horrayn waxa weeyi in ay tahay in la arkaa in ay tahay in Times premium ay u baahan tahay user a si ay qaataan $ 7.99. Tiro ka mid ah kuwan raadkaygay iyo sidoo kale heerka yara ayaa sidoo kale kala duwan si user ay u baahan tahay in ay go'aan ka diinta iyo sidoo kale miisaaniyadda hor Socota qorshaha. Muuqaaladan adeegga iyo sidoo kale shaxda isbarbardhigga waxaa laga heli karaa URL http://music-streaming-services.softwareinsider.com/l/113/Deezer-Premium . URL waxa uu warbixin ka dhigi kara ilaa maskaxda user ee arrintan la xiriira. Times ayaa premium natiijooyin tayo sare leh oo u ogolaanaya dadka isticmaala si aad u hesho waayo-aragnimo ugu fiican oo ad lacag la'aan maqalka music ah. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay ugu horreeya oo dhan soo booqo URL ah, ka barato farqiga u dhexeeya dalabyo ka dibna ugu danbeysay ee go'aan ka gaarto haddii aan adeegga faa'iido.
Si aad u heshid natiijada ugu fiican iyo hubinta ku qanacsan ee maskaxda hoos ku qoran waa 5 siyaabo si aad u hesho caymiska Deezer ah oo lacag la'aan ah si ay ugu raaxaystaan ​​kuwan raadkaygay aan xad lahayn,
Iyada oo online blog
Geedi socodka waa inuu kan la raacay waxaa ku xusan sida under:
1. URL ayaa http://freedeezerpremium2014.blogspot.com/ waa in ay soo booqdaan si ay u sii wado:
2. Marka user wuxuu go'aansaday dhererka waqtiga icon ku habboon waa in la riixi in la sii wado in bogga soo socda. Halkan user u baahan yahay in guji kaarka ku habboon si ay u sheegan xeerka. Code waxaa markaas in lagu dabaqo halka saxiixin premium Deezer si ay u lacag la'aan ah waqtiga loo cayimay waqtiga soo xulay la'aan:
Waxaa jira tobanaan kun oo pages on Facebook kaasoo u ogolaanaya user ay u wanaagsan u isticmaasho khayraadka isla markaana ay xeerka in la soo furtay ayaa laga yaabaa in la sameeyo Times ee lacag la'aan ah.
1. URL in ay soo booqdaan waa https://www.facebook.com/DeezerFreePremiumCodes2015/ in ay soo booqdaan bogga Facebook ee:
2. user The ma aha oo kaliya codes promo, laakiin sidoo kale habka uu soo xiriira si ay u codsan ka heli kartaa. User ayaa ka heli kartaa macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan mawduuca waxaana la updated waqti ka waqti la isticmaalayo this page.
Geedi socodka si aad u hesho caymiska Deezer lacag la'aan ah waxaa laga heli karaa iyadoo la raacayo habka ku qoran:
1. URL The in uu yahay in ay soo booqdaan waa http://deezer-premium-free.tumblr.com/ si boostada la xiriira waxaa browsed:
2. Boggan waxaa sidoo kale Wararka tirada posts iyo geedi socodka maalin kasta si ay u iftiiminaya user ee ku saabsan mawduuca. Account Tumblr A waa lagama maarmaan si ay u helaan ka socda habka:
Games crack geedi socodka
Games Crack waa website caan ah in la og yahay si ay u bixiyaan siyaabo adeegyada caymiska lacag la'aan ma aha oo kaliya Deezer laakiin sidoo kale adeegyada kale ee music caanka ah ee dunida sida Google Music iyo Spotify. Geedi socodka waa sida soo socota:
1. URL ayaa http://www.gamescrack.org/free-deezer-premium/ waa in ay soo booqdaan si ay u helaan in ay page in uu leeyahay oo dhan habraaca ku xusan:
2. user ayaa markaas u baahan yahay inuu soo bixi file ah oo ku xidh gal nidaamka ka hor codsiga Deezer ka desktop la soo bixi inay ku raaxaystaan ​​premium Deezer lacag la'aan ah:
YouTube shaki la'aan waa il aqoonta. User ayaa isticmaali kartaa ka videos la xiriira in halkaas uploaded si aad u hesho fikrad ku saabsan adeegga. Mid ka mid ah video sida kaas oo sharxaya habka complete lagu heli kartaa ugu URL https://www.youtube.com/watch?v=Jyxb1aKlZy0 si user helo diiwaangelinta deg dega ah oo lacag la'aan ah. Marka geeddi-socodka ayaa la raacay waxaa lagula talinayaa in ay ka dalban waa sida ma aha in muddo dheer oo uu leeyahay 2:15 daqiiqo ee content in uu yahay mid aad u fudud iyo sidoo kale khuseyso. User ayaa waxaa sidoo kale looga baahan yahay inay akhriyaan sharaxaad video ee buuxa si ay u helaan in aqoon qoto dheer iyo haddii ay suurtogal tahay video waa in sidoo kale waxaa lagala soo bixi tixraaco mustaqbalka iyo sidoo kale isticmaalka.
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPod
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay Ipad
Sida lagu Helo Music Free on Android
5 Goobaha Best u Latest Music
> Resource > Music > [xalin]: Sida lagu Helo Deezer Premium u Free